Fandrobana teratany vahiny :: Efatra mianadahy voarohirohy tamin'ny fanafihana Sinoa • AoRaha
Fandrobana teratany vahiny Efatra mianadahy voarohirohy tamin’ny fanafihana Sinoa
Vehivavy iray sy lehilahy telo, voatondro ho nanafika teratany sinoa nandeha fiara, teny amin’ny lalana farihy Masay, ny harivan’ny alarobia 16 janoary lasa teo, no voatazona etsy amin’ny Pôlisy misahana ny heloka bevava (BC), etsy Anosy.
Voasambotra teny Behoririka ny lehilahy iray. Teny Ambatobe no nahatrarana ny roa hafa, rehefa nofandrihan’ ny pôlisy. Nampanantsoina kosa ilay vehivavy. Izy telo lahy no ahiana mafy ho nandray anjara mivantana tamin’ny fanafihana. Voalaza fa nampiantrano azy ireo iry vehivavy.
Teratany sinoa avy nivarotra teny Behoririka no lasibatra, tamin’io harivan’ny alarobia 16 janoary io. Lehilahy efatra nitondra môtô no nanafika. Voaroba ny vola enina tapitrisa ariary sy taratasy maromaro.
Taorian’ny fikaroham-baovao dia voasambotra teny Behoririka, tamin’ny alarobia 30 janoary lasa teo, ny lehilahy iray. Nisy fifanoherana sy fampiasam-basy tamin’ny fotoana nisamborana azy. Ahiana mafy ho anisan’ireo jiolahy izy tamin’ny fahitana ny môtô iray teny aminy.
Nitohy teny Ambatobe ny fisamborana, andro vitsy taorian’izay. Tra-tehaka ny lehilahy roa.
Fifampitifirana tany morondava :: Lehilahy iray lavon’ny pôlisy
Ramatoa lehibe nivalampatra teo amoron-dalana